Myat Shu - ရသ
You are here : Myat Shu » Archives for ရသ
Published By Myat Shu On Tuesday, May 13th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
Picture credit to www.aliexpress.com ခြေလှမ်းလိုက်တိုင်း နာကျင်မှုကို ခံစားရပေမယ့် အားတင်းပြီး တရွေ့ရွေ့ လျှောက်ခဲ့တယ်။ ၀င်ပေါက်နေရာ ရောက်တော့ နည်းနည်း မြင့်နေတာနဲ့ ရွေ့ရုံနဲ့ မရတော့။ ခြေထောက်တဖက်ကို မ ကြည့်တော့ အလွန်လေးလံပြီး ချုပ်ရိုးပတ်လည်က နာကျင်လာတယ်။ ၀င်ပေါက်တံခါး နံရံကို လက်တဖက်ကကိုင် အားယူပြီး ကိုယ်တခြမ်းရွေ့ဖို့ သူ ကြိုးစားတယ်။ ‘ဟင် မခဲ ဘာလုပ်မလို့လဲ။ အိမ်သာဝင်ချင်တာလား။ ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး’ သူ့ညီမ အပြေးတပိုင်း ရောက်လာတယ်။ ချိုင်းက သူ့ကို မတယ်။ ညီမကို မှေးကာ မခဲ ခြေလှမ်းကြွလိုက်တယ်။ အသေးအဖွဲ အတားအဆီးလေး တခုကိုမှ မကျော်လွှားနိုင်သည့် အဖြစ်ပါလား။ ‘တံခါး မပိတ်လိုက်နဲ့ မခဲ။ စေ့ရုံစေ့ထား။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, April 28th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
(၁) လျှော်ချောင်းကျေးရွာဘက်ကမ်းမှ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော ဆောင်းလေပြေသည် “မောင့်ဘ၀ကိုယ်ခွဲ … မြတ်နိုးရတဲ့ ရင်နှစ်အသည်း … တစ်ရွာသူတစ်မြို့သူ ဖြစ်တော့လည်း .. မြင်ချင်ကြည့်ချင် တွေ့ချင်ပေမယ်” အစချီသော အာဝါဟ၀ိဝါဟ ဆွေပြမျိုးပြ မင်္ဂလာတေးသံကို ချောင်းတစ်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသော အုန်းတောစုကျေးရွာဘက်သို့ သယ်ဆောင်လာလေသည်။ ကျယ်လောင်စူးရှ မြူးကြွသောတေးသံနှင့်အတူ ၀တ်ကောင်းစားလှ ၀တ်ဆင်ထားသော ကာလသား၊ ကာလသားသမီး တစ်သိုက်သည် နံနက်ခင်း၏ ဖူးသစ်စ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် ပြာယာခတ်နေကြ၏။ ကလေးတစ်သိုက်မှာ လျှော်ချောင်းကျေးရွာနှင့် အုန်းတောစုကျေးရွာ ချောင်းကူးတံတား၏ ဟိုမှာဘက်ကမ်း ဒီမှာဘက်ကမ်းတွင် ထမင်းစား လက်မှတ် ကိုယ်စီ ကိုင်၍ ရွစိထိုးနေလေ၏။ သက်ကြီးရွယ်အို တစ်စုမှာလည်း နေပူဆာလှုံရင်း မင်္ဂလာ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ မိဘဘိုးဘွား ဆွေမျိုးသားချင်းများ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, April 5th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
Noell S. Oszvald @ http://www.daily-art.com/noell-s-oszvalds-blackwhite-self-portraits/ (၁) “သမီး … ခင်မေ” တိုးတိုးလေးမှ တကယ့်တိုးတိုးလေး။ နာရီသံ တချက်ချက်မှလွဲလျှင် ပကတိ တိတ်ဆိတ်နေသည့် ဒီအခန်းငယ်အတွင်းမှ ထိုလေသံတိုးတိုးလေးက ကျွန်မနားထဲမှာတော့ ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီးနေသလို။ အသံရှင်ကိုတော့ ကျွန်မ လှည့်မကြည့်မိ။ သည်အခန်းထဲကို စ၀င်လာစဉ်အချိန်ကတည်းက ထိုအသံရှင်ကို ကျောခိုင်းပြီး ကျွန်မထိုင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းထဲသို့ ၀င်လျှင်ဝင်ချင်း ၀င်သက်နှင့်ထွက်သက်ကွဲအောင်ပင် ခဲယဉ်းစွာ အသက်ရှုနေရသည့် လွန်စွာကြုံလှီလှည့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကို ဖျတ်ကနဲမြင်လိုက်ပြီးသည့်နောက် ကျွန်မ၏ အကြည့်ကို အခန်း၏ မျက်နှာကျက်ဆီသို့လွှဲထားကာ တမင်ကျောပေးပြီးထိုင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ကျောဆီက လေသံခပ်တိုးတိုးနှင့်တဆက်တည်းပင် ရှိုက်သံတချို့ကပ်ပါလာသည်။ ထို့အတွက် ဘယ်ဘက်ရင်အုံအောက်ဘက်ဆီမှ ဆစ်ကနဲ နာကျင်မှုကို ရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရသော်လည်း လှည့်မကြည့်နိုင်လောက်အောင် ကျွန်မနှလုံးသားက မာကျောနေဆဲ။ “ခင်မေ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, March 19th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
သည်နေ့ညကျမှ မြကို ထူးထူးခြားခြား သူ သတိရမိနေသည်။ အဝေးဆီမှ သဲ့သဲ့ပျံ့လွင့်လာသော အငြိမ့်ဆိုင်းကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်သည်။ တကယ်တော့ သည်ညမှ မဟုတ်။ ယခုလို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း မြကို လွမ်းရပါသည်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေကလည်း ရံဖန်ရံခါ ရှိနေတတ်ပြန်တော့ မြကို အောက်မေ့သည့်စိတ်က လောင်စာနှင့် မပြတ်သော မီးပမာ တညီးညီးတောက်လောင်လွန်းလှသည်။ ညှင်းသွဲ့သွဲ့မြူးနေသော ဆောင်းမပီ့တပီ လေစိမ့်စိမ့်နှင့်အတူ မြ ခေါင်းမှ စံပယ်ပန်းရနံ့များကို ခုတစ်မုဟုတ်ချင်း နမ်းရှိုက်လိုက်ရသလိုလို၊ စည်းဝါးတကျ ချိုအေးစွာ သီဆိုလိုက်သော သီချင်းသံသည်ပင်လျှင် မြ နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ကျလာသလိုလို မရေရာသော စိတ်အစဉ်သည် သူ့ကို လှည့်စားလျက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်က မြနှင့် သူ တရားဝင်နှုတ်ဆက် လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ ... Continue Reading
“လူဆိုရင် မိဘမေတ္တာ ..... ဘုရားမဟောတောင် သိတတ်ရမယ်... လူဆိုရင် သမိုင်းရဲ့ သစ္စာ ..... ဘုရားမဟောလဲ ထိန်းသိမ်းရမယ် ဟေ့” “လူဂျဂါးပေါဒါဘာ” စပီကာကထွက်နေတဲ့ အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့ အသံကိုဖြတ်ပြီး ပီပီသသကြည်ကြည်မြမြနဲ့ အနီးအနားကပ်ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံရှင်ကို မကြည့်ဘဲနဲ့ သိလိုက်ပြီ။ ပြောင်လေး .....။ သုံးနှစ်မပြည့်တပြည့် သူ့အသက်နဲ့ မလိုက်အောင် အသံလုံးကြီးကြီးနဲ့ ထူးခြားတဲ့အသံပိုင်ရှင်ကလေးမို့ ဟောဒီတစ်လမ်းလုံးမှာ သူ့ကို မသိသူရယ်မရှိ။ အသားဖြူဖြူ၊ နှုတ်ခမ်းနီထွေးထွေးလေးနဲ့ အဖေတူ နှဖူးပြောင်လေးမို့ သူ့ကို အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ပြောင်လေးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ အံမယ် .... ကိုယ်တော်ချောလေးက အိမ်တံခါးဝမှာ ဒူးကလေးကို ညွတ်ကာ၊ ကိုယ်ကလေးဆန့်ကာနဲ့ တေးသံအလိုက်ကနေလိုက်တာများ တကယ့်ကို ရော့ခ်ကာကြီးလို။ စကားကို ၀ါကျတစ်ကြောင်းပြည့်အောင် မပြောတတ်တဲ့ဒီကလေးက ... Continue Reading
မက်ဇဲပါ အဆုံးမှာ ပျက်သုဉ်းသွားခြင်း
Published By Myat Shu On Monday, February 17th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
www.imow.org အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ လူမှုရေးအရလေးပင် စကားတစ်ခွန်းတစ်လေ မဆိုမိဘဲ အပေါ်ထပ်က ကိုယ့်အခန်းရှိရာကိုသာ တန်းဝင်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့လည်း အပေါ်ကုတ်အင်္ကျီကိုသာချွတ်ပြီး အ၀တ်အစားပင်မလဲမိဘဲ ကုတင်ပေါ်မှာ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် လဲလျောင်းနေလိုက်တော့သည်။ ပြီးသွားပြီ ....အရာအားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် ထိုအရာကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီထင်သည်။ အနှစ်နှစ် အလလ တမြည့်မြည့်လောင်နေခဲ့သော မီးသည် ဒီနေ့တော့ အပြီးသတ်သွားခဲ့ပြီ ထင်သည်။ အခန်းတံခါးဖွင့်သံ ကလစ်ကနဲ ကြားလိုက်ရပြီး ဖော့နင်းလျှောက်လာသော ခြေသံတစ်စုံကိုပါ ဆက်ကြားရသည်။ ကုတင်နားအထိ လျှောက်လာသံ ၊ တစ်စုံတစ်ခုကို ကုတင်ဘေးက စားပွဲခုံပုလေးပေါ် တင်လိုက်သည့်အသံ၊ ပြီးတော့ ခြေဖော့နင်းပြီး ပြန်ထွက်သွားသည့်အသံ ။ ညင်ညင်သာသာ လှုပ်ရှားမှုများပေမယ့် အားလုံးကို သိလိုက်သည်။ ညီမ၀မ်းကွဲလေး ငြိမ်း ဖြစ်မည် ထင်သည်။ သူ့အတွက် သံပုရာရည် ဒါမှမဟုတ် လိမ္မော်ရည် တစ်ခုခုကို ယူလာပေးသည် ဖြစ်မှာပေါ့။ မျက်စိကို ... Continue Reading